October waa bishii Cristiano Ronaldo Sabab? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
October waa bishii Cristiano Ronaldo Sabab?
Published on October 13, 2017 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(13-10-2017) Xiddiga kooxda kubada cagta Real Madrid ee Cristiano Ronaldo ayaa kujira xiligii ugu xumaa kadib markii uu Gool u dhalin waayey Naadigiisa 3 kulan oo Xiriir ah Horyaalka La Liga taas oo aan Horay u dhicin tan iyo markii uu ku soo biirey Real Madrid Sanadkii 2009 kii.
Hadaba Cayaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa bishaan aynu kujirno oo ah October waxaa lagu Tilmaamaa in ay tahay bisha uu Goolasha ugu badan u dhaliyo Kooxdiisa tan iyo Markii uu ku soo biirey,
Ronaldo ayaa Xiligiisii koowaad ee Real Madrid bishii October 2010 Waxa uu dhaliyey 4 mar oo min Sadexleey ah halka Sanadihii ku xigey uu marka lagaaro bishaan uu dhalinayey ugu yaraan 7 Gool isaga oo 10 Gool dhaliyey Xili Cayaareedkii 2014/15 bishiisa October.
Goolasha ugu badan October waxa uu Ronaldo ka dhaliyey kooxaha Levante Racing Barcelona, Sevilla, Alaves iyo Athletic Club.hada inta lagu Guda jiro bishaan waxa uu la cayaari doonaa hadii uusan dhaawacmin ama laganaaxin kooxaha kala ah Getafe, Tottenham, Eibar iyo Girona.